စလ်မန်ဖာရစီ - ဝီကီပီးဒီးယား
အစ္စလာမ်မတိုင်ခင်အရင် စလ်မန်ဖာရစီ (အင်္ဂလိပ်: Salman al-Farisi; အာရပ်: سلمان الفارسي Salmān al-Fārisī) ၏ အမည်မှာ ရူးဇ်ဗေဟ် (Rouzbeh; ပါးရှန်း: روزبه) ဖြစ်သည်။ ‎တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ ဆွဟာဘာသာဝကကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်သည် ‎စလ်မန်ဖာရစီကို မိမိ၏ အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားမှ ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။ ‎ထိုကြောင့် စန်မန်မိုဟမ္မဒီဟု ကျော်ကြားခဲ့လေသည်။ ကိုရိုက်ရှ် ရန်သူတို့သည် မဒီနာမြို့သို့ ‎လာရောက်တိုက်ခိုက်သည့် အခါတွင် စလ်မန်ဖာရစီသည် မဒီနာမြို့ပတ်ပတ်လည်တွင် ‎ခံတပ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် အကြံပေးခဲ့သည်။ သာဝကကြီး စလ်မန်ဖာရစီသည် အထူးတဖြင့် ‎ရှီအာမွတ်စ္စလင်မ် ဘာသာဝင်တို့အကြား ဂုဏ်ရည်မြင့်မား၍ မြင့်မြတ်သည့် အရိုက်အရာရှိကြောင်း ‎သတ်မှတ်ထားကြသည်။
စလ်မန်ဖာရစီသည် အီရန်လူမျိုးနွယ်စုမှ ဖြစ်သော်ငြားလည်း မဂျူစီမီး ကိုးကွယ်သူအဖြစ်နှင့်သာ မနေခဲ့ဘဲ စစ်မှန်သည့် တရားတော်များကို ရှာဖွေရင်း ‎နိုင်ငံအနှံ့ ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ တစ်ချို့နိုင်ငံများတွင် ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ ‎နောက်ဆုံးတွင် တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် စလ်မန်ကို ငွေကြေးအသပြာဖြင့် ဝယ်ယူ၍ ကျွန်အဖြစ်မှ ‎လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ‎ စလ်မန်ဖာရစီသည် အီရန်နှင့် ခရစ်ယန်တို့မှ ပညာရပ်တို့ကို တတ်မြောက်ထားသူဖြစ်သည်။ ‎တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ အထူးအတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ခန္ဒက်စစ်ပွဲတွင် ‎ခံတပ်အဖြစ်တူးမြောင်းကြီးကို မဒီနာမြို့ပတ်ပတ်လည်တွင် တူးရန်အကြံပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ‎နောက်ဆုံးအချိန်များတွင် မဒါအိင်ပြည်နယ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူပေးခဲ့သည်။
၁ မွေးရပ်ဌာနေနှင့် ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလ
၂ စလ်မန်ဖာရစီ၏ သက်တော်
စလ်မန်သည် အီရန်နိုင်ငံ အစ်ဖဟန်မြို့ရှိ ဂျေးရွာမှ မြေပိုင်သဋ္ဌေးတစ်ဦး၏ သားဖြစ်သည်။ မွေးရပ်ဌာနေနှင့် ပတ်သက်၍ သမိုင်းတွင် အမျိုးမျိုးသော ထင်မြင်ချက်များကို ရေးသားထားကြသည်။ ‎ထိုကြောင့် အစ်ဖဟန်မြို့မှ တစ်ခြားသောရွာအမည်များ၊ ဖာရ်စ်ပြည်နယ်မှ ရွာများ၊ ခူဇီစ်သန်ပြည်နယ်မှ ရာမ်ဟွရ်မွဇ်မြို့များ‎  စသည်ဖြင့် စလ်မန်၏ မွေးရပ်ဌာနေဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းပညာရှင်များက ဖော်ပြထားကြသည်။ ‎တစ်ချို့သမိုင်းပညာရှင်များသည် စလ်မန်အား မဇ်ဒကီမျိုးနွယ်မှဖြစ်ကြောင်း၊‎ တစ်ချို့မှာ မာနဝီမျိုးနွယ်စုမှဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားကြသည်။
စလ်မန်ဖာရစီ၏ သက်တော်နှင့် ကွယ်လွန်သည့် ခုနှစ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ သမိုင်းတွင် ‎အမျိုးမျိုးဆိုထားကြသည်။
ရှိုက်ခ်သူစီသည် စလ်မန်ဖာရစီအား ဟဇရသ်အီစာ(အ.စ)ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် ‎အသက်အရွယ်ရှိသည်ဟုပင် ဆိုထားသည်။ ထိုသို့ဆိုထားပါလျှင် ၎င်း၏သက်တော်မှာ ‎‎(၆၀၀)ကျော်ပင်ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည်။
တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ထံမှ ရေဝါယသ်တော်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ စလ်မန်ဖာရစီ၏ ‎သက်တော်သည် (၄၅၀) ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
ဆရဒ်မွရ်သဇာ နှင့် ရှိုက်ခ်သိုရိုင်ဟီး တို့က သက်သေသာဓကများကို ထောက်ရှု၍ စလ်မန်ဖာရစီ၏ ‎သက်တော်မှာ (၃၅၀) ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပေသည်ဟု သမိုင်းကျမ်းများတွင် ရေးသားထားကြသည်။
တစ်ခြားသောသမိုင်းပညာရှင် အများစုမှာ စလ်မန်ဖာရစီ၏သက်တော်အား (၂၅၀) ဖြစ်ကြောင်း ‎ဖော်ပြထားကြသည်။ မိုဟဒ္ဒိစ်နူရီသည် စလ်မန်ဖာရစီ၏ သက်တော်ကို (၂၅၀) ဟုဆိုထားခြင်းသည် ပို၍ ‎ခိုင်လုံသည်ဟု ဆိုထားသည်။ အိဗ်နေအဗ်ဒွလ်ဗီရ်သည် အလ်အိစ်သီအားဗ်ဆိုသည့်ကျမ်း အတွဲ(၂) ‎စာမျက်နှာ(၁၉၅)၊ အိဗ်နေအစီးရ်သည် အွစ်ဒွလ်ဂါဗာ ဆိုသည့်ကျမ်း အတွဲ(၂) စာမျက်နှာ (၃၂၂)၊ ‎အလ်စီးရသွလ်ဟလဗီယာ ဆိုသည့်ကျမ်း အတွဲ(၁) စာမျက်နာ(၁၉၅)၊ ဆွဖ်ဝသွလ်ဆွဖ်ဝါဟ်ဆိုသည့်ကျမ်း ‎အတွဲ(၁) စာမျက်နှာ(၅၅၅)၊ မဂျာလိစွလ်မိုအ်မေနီးန် ဆိုသည့်ကျမ်း အတွဲ(၁) စာမျက်နှာ(၂၀၈)၊ ‎အလ်အေဆွာဗာဟ် ဆိုသည့်ကျမ်း အတွဲ(၂) စာမျက်နှာ (၆၂)၊ အလ်ဂဒီးရ် ဆိုသည့်ကျမ်း အတွဲ(၇) ‎စာမျက်နှာ(၂၈၂)၊ အဒ္ဒရဂျာသွရ်ရဖီးအာဟ် ဆိုသည့်ကျမ်း စာမျက်နှာ(၂၂၀)၊ စသည့်ကျမ်းများတွင် ‎စလ်မန်ဖာရစီ၏ သက်တော်ကို (၂၅၀) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည့် အဆိုသည် ‎ပို၍ခိုင်လုံထောက်ထားကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
စလ်မန်ဖာရစီသည် မာနီ မျိုးနွယ်စုများမှ ဖြစ်သည်။ မာနီမျိုးနွယ်စုတို့သည် ဇရ်သွရှ်သီ သာသနာကို ‎အထွတ်အမြတ်ထား ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ထိုသာသနာကို လက်မခံလိုသော ‎စလ်မန်သည် အီရန်နိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။
စလ်မန်ဖာရစီသည် လူငယ်ဘဝတွင် ခရစ်ယန်သာသနာအပေါ် ယုံကြည်သူတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ‎ပညာတော်သင်ရန် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခဲ့သည်။‎ အဗူရိုင်ဟားန် ဘီရူနီးသည် အလ်အာစားရွရ်ဗာကီးယာ အန်နီလ်ကိုရူးနီလ်ခါလီယား ဆိုသည့်ကျမ်းတွင် ‎အဗ်ဒွလ္လာ၏သားဖြစ်သူ စလာမ်သည် စလ်မန်ဖာရစီထံမှ ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ရေးသားပြုစုခဲ့သည်ဟု ‎ဆိုထားလေသည်။ စလ်မန်ဖာရစီသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေခိုက် ဆရာဖြစ်သူမှ ‎ဆုံးပါးသွားသည့်အတွက် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ ရောက်လာခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ‎တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် ခဒီဂျာသခင်မကြီး၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို ‎ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပေးနေသည်။ စလ်မန်ဖာရစီသည် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ လာနေခိုက် လမ်းခုလတ်တွင် ‎ဓားပြတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံကြရ၍ သုံ့ပန်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခြင်းကို ‎ခံခဲ့ရသည်။ မဒီနာမြို့မှ ယဟူဒီတစ်ဦးသည် စလ်မန်ဖာရစီကို ကျွန်အဖြစ်ဝယ်ယူ၍ မဒီနာမြို့သို့ ‎ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လေသည်။
စလ်မန်ဖာရစီသည် မဒီနာမြို့တွင် တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)နှင့် သိကြွမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ‎အစ္စလာမ်သာသနာသို့ ကူးပြောင်းလာခဲ့သည်။ ‎ တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မဒီနာမြို့သို့ ဟစ်ဂျရသ် ပြောင်းရွှေ့လာချိန်တွင် တမန်တော်၏ ‎ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာသို့ ကူးပြောင်းလာသည်ဟု စဖီးနသွလ်ဗေဟာရ် ကျမ်းတွင် ‎ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ တမန်တော်မြတ်သည် စလ်မန်ဖာရစီ၏ သခင်ကို စလ်မန်၏ လုပ်အားခဖြင့် ‎သူ့အားကျွန်အဖြစ်မှ ကင်းလွှတ်ခွင့်ပေးရမည်ဟု စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် နှင့် ‎မဒီနာမြို့သားတို့သည် ထိုယဟူဒီအား စွန်ပလွန်ပင် (၄၀) နှင့် ဒီရ်ဟမ် (၄၀၀) ကိုပေးဆပ်၍ စလ်မန်အား ‎ကျွန်ဘဝမှ ကင်းလွှတ်ခွင့်ပေးခဲ့ကြသည်။  ထိုကြောင့် စလ်မန် နှင့် တမန်တော်တို့ သိကြွမ်းဝင်မှုသည် တမန်တော်အဖြစ် ‎ပွင့်တော်မူပြီးနောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသာ ရေးသားထားကြပြီး ခုနှစ်အတိအကျကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။
ခန္ဒက်စစ်ပွဲသည် ဟစ်ဂျရီခုနှစ် (၅)တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။ စလ်မန်ဖာရစီ၏ အကြံပေးချက်ဖြင့် မဒီနာမြို့ကို ‎တူးမြောင်းတူး၍ ခံတပ်ပြုလုပ်ထားခဲ့သည်။ ခန္ဒက်သည် ဖာရစီစကားမှဖြစ်ပြီး အရဗီစကားသို့ ‎ကူးပြောင်းလာသည့် ဝေါ်ဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ တူးခြင်းဖြစ်သည်။ ‎ပါရစီရှေးဟောင်းစာပေများတွင်‏ «کن» ‏‎ ဆိုသည့်မူရင်းပုဒ်မှဆင်းသက်လာပြီး တူးခြင်းဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ကို ‎ဖော်ဆောင်သည်။ ထိုအဓိပ္ပါယ်နှင့်ဝေါ်ဟာရကို ယနေ့တိုင် အီရန်နိုင်ငံဖာရစီ ဘာသာစကားတွင် ‎အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။ စလ်မန်ဖာရစီကို မဒီနာမြို့ရှိ မျိုးနွယ်စုတို့သည် မိမိတို့နှင့်အတူ ‎နေထိုင်စေချင်ကြသည်။ ထိုကြောင့် မိုဟာဂျိရ် မက္ကာမြို့မှမဒီနာသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြသူများသည် စလ်မန်ကို ‎ကျွန်ုပ်တို့မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ထိုကြောင့် အန်ဆွာရ် မဒီနာမြို့သားတို့သည်လည်း ‎စလ်မန်သည် ကျွနု်ပ်တို့မျိုးနွယ်ဝင်စုဖြစ်သည်ဟု ဆိုလာကြသည်။ ထိုအခါ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည်လည်း ‎စလ်မန်သည် ငါကိုယ်တော်မြတ်၏ အဲဟ်လေဘိုင်သ် အိဿရိ အနွယ်တော်မွန်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ဆိုခဲ့သည်။
မာစီနီယွန်းသည် မိမိပြုစုထားသောစာအုပ်တွင် စလ်မန်ဖာရစီသည် တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) ‎ကွယ်လွန်တော်မူပြီးနောက် စကီဖာတွင် သာဝကတစ်ဦးဖြစ်သူ အဘူဗကရ်ကို ‎ခေလာဖသ် အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ် အလျင်တလို ခန့်အပ်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ‎ဘက်မလိုက်ဝါဒီကျင့်သုံး၍ ဘေးဖယ်ရှောင်နေခဲ့သည်။ မဒါအေနီနှင့် ဗေလာဇိုရီ ‎သမိုင်းကျမ်းပြုပညာရှင်တို့သည် ‎‏ «کرداد و ناکرداد»‏ ဆိုသည့်စာသားဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ ‎ဆိုလိုသည်မှာ ဖာရစီဘာသာစကားတွင် အလယ်အလတ်လမ်းလိုက်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထိုကြောင့် ‎တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဟစ်ဂျရီခုနှစ်(၁၁)တွင် ဦးခေါင်းတုံး၍ ဓားဆွဲကာ ‎ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်ဟု အေမာမီယာတို့၏ ယုံကြည်ချက်ကို သက်သေမပြုနိုင်ပေ။ သို့သော် သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ‎ယာအ်ကူဘီ မတိုင်မီ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) အရင် အီရာကီ၏ သမိုင်းအဆိုများတွင် စလ်မန်ဖာရစီသည် ‎ခေလာဖသ် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အဗူဘကရ်ကို ခန့်အပ်ခဲ့သည့်အချိန်တွင် ခေလာဖသ်နှင့်ပတ်၍ ‎အမှန်တရားမှ တိမ်းဆောင်းသွားသည်ကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဆိုထားလေသည်။ ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းကို ‎သီးသန့်တွေ့ဆုံမှုတို့တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
မာစီနီယွန်း ရေးသားပြုစုသည့် စလ်မန်ပါးက် ဆိုသည့် စာအုပ်တွင် စလ်မန်ဖာရစီကွယ်လွန်သည့် သမိုင်းမှာ ‎အတိအကျမရှိဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဒုတိယခလီယာ အိုမရ် အုပ်ချုပ်ရေး နှောင်းပိုင်း(သို့) တတိယခလီဖာ ‎အွတ်စ္စမန် အုပ်ချုပ်ရေးကာတွင် ကွယ်လွန်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ သမိုင်းပညာရှင်များဖြစ်သူ ဝါကေဒီ နှင့် ‎အိဗ်နေစက်အ်ဒ် တို့သည် တတိယခလီဖာ အွတ်စ္စ်မန် အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်တွင် ကူဖာမြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု ‎ဆိုထားလေသည်။ (၃)ရာစုတွင် ရေဝါယသ်ကိုစုစည်းတင်ပြခဲ့သူများက ဟစ်ဂျရီ(၃၈)တွင် ‎ကွယ်လွန်ကြောင်းလည်း ဆိုထားကြသည်။ မာစီနီယွန်းသည် မိမိပြုစုထားသည့်စာအုပ်တွင် ‎စလ်မန်ဖာရစီသည် တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ သမီးတော် ဖွာသွေမာသခင်မကြီး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ‎ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက် မဒီနာမြို့မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ထိုနောက် ‎စလ်မန်ဖာရစီသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာလာချိန်တွင် အတူလိုက်ပါခဲ့ကြသည့် ‎ဗနီးအဗ်ဒွလ်ကိုင်းစ် မျိုးနွယ်စုတို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဗနီးအဗ်ဒွလ်ကိုင်းစ် မျိုးနွယ်စုတို့၏ အခြေအနေကို ‎လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အဆိုပါတင်ပြခဲ့မှုကို သိမြင်နိုင်ပေသည်။
↑ (2004) Holy People of the World: A Cross-cultural Encyclopedia, Volume 1. ABC-CLIO, 761. ISBN 978-1576073551။
↑ الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۱۱ و الوفی بالوفیات ج ۵ ص ۹۸
↑ قبل از ظهور اسلام تاریخ ایران
↑ مانی و آیین او از: فرید شالیزاده و سایت روزنامک
↑ مدت عمر
↑ الآثار الباقیه عن القرون الخالیه دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
↑ شناخت هویّت ایرانی از زمان فردوسی تاکنون مرتضی ثاقب فر - سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در «همایش هویّت و حاکمیت ملی ایران «در ۲۷ بهمن ۱۳۸۳، منتشره در ماهنامه ایران‌مهر به تاریخ اسفند ۱۳۸۳
↑ سابقهٔ تاریخی اسکان قبایل عرب در خوزستان دکتر امیرحسین خنجی - دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۱ - ایران امروز
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စလ်မန်ဖာရစီ&oldid=414296" မှ ရယူရန်
၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။